Law & More icubungula imininingwane yomuntu. Ukuze sikwazise ngendlela ecacile necacile mayelana nalokhu kucubungula imininingwane yomuntu, lesi sitatimende sobumfihlo siyabhalwa phansi. Law & More ihlonipha imininingwane yakho futhi iqinisekisa ukuthi imininingwane yomuntu enikezwe kithi iphathwa ngendlela eyimfihlo. Lesi sitatimende sobumfihlo sisebenzisa isibopho sokwazisa abantu ngezihloko zedatha Law & More icubungula imininingwane yomuntu. Lesi sibopho sivela ku-General Data Protection Regulation (GDPR). Kulesi sitatimende sobumfihlo imibuzo ebaluleke kakhulu ephathelene nokuqhutshwa kwemininingwane yomuntu nge Law & More izophendulwa.
Law & More isilawuli maqondana nokucutshungulwa kwemininingwane yakho. Law & More itholakala De Zaale 11 (5612 AJ) Eindhoven. Uma kuphakama imibuzo ephathelene nalesi sitatimende sobumfihlo, ungaxhumana nathi. Ungasifinyelela ngocingo ngenombolo ethi +31 (0) 40 369 06 80 futhi nge-imeyili ku [i-imeyili ivikelwe]
Imininingwane yomuntu uqobo yonke imininingwane isitshela okuthile ngomuntu noma okungahlotshaniswa nomuntu. Imininingwane esitshela ngokungaqondile ngokuthile ngomuntu, nayo ibhekwa njengedatha yomuntu siqu. Kulesi sitatimende sobumfihlo, idatha yomuntu siqu isho yonke imininingwane ukuthi Law & More izinqubo ezivela kuwe nokuthi ungakhonjwa kanjani.
Law & More icubungula idatha yomuntu siqu ukuze ihlinzeke ngezinsizakalo kumakhasimende noma imininingwane yomuntu enikezwe izifundo zedatha ngokwazo. Lokhu kufaka imininingwane yokuxhumana neminye imininingwane yomuntu siqu edingekayo ekusetshenzisweni kwecala lakho, imininingwane yomuntu oyigcwalisile kumafomu okuxhumana noma amafomu wewebhu, imininingwane oyinikeza ngesikhathi sokuxoxisana (nokwazisa), imininingwane yomuntu siqu etholakala kumawebhusayithi omphakathi noma imininingwane yomuntu uqobo ingatholakala kumarejista womphakathi, njengeCadastral Registry kanye neRejista Yokuhweba yeChamber of Commerce. Law & More icubungula idatha yomuntu siqu ukuze ihlinzeke ngezinsizakalo, ukuthuthukisa lezi zinsizakalo futhi nokukwazi ukuxhumana mathupha nawe njengesihloko sedatha.
Idatha yomuntu uqobo icutshungulwa ngubani Law & More?
Lesi sitatimende sobumfihlo sisebenza kubo bonke abantu imininingwane yabo ecutshungulwe Law & More. Law & More icubungula imininingwane yomuntu uqobo yabantu engaqondile noma ngqo, esifuna ukuba nobudlelwano noma ubudlelwano. Lokhu kufaka phakathi abantu abalandelayo:
(ezingaba khona) amaklayenti we Law & More;
abantu abanentshisekelo ezinhlelweni zika Law & More;
abantu abaxhumeke enkampanini noma enhlanganweni ngayo Law & More uye, ufuna ukuba nobudlelwano;
izivakashi amawebhusayithi Law & More;
wonke omunye umuntu oxhumana naye Law & More.
Inhloso yokusetshenziswa kwedatha yomuntu siqu
Law & More icubungula imininingwane yakho ngezinhloso ezilandelayo:
Ukuhlinzeka ngemisebenzi yezomthetho
Uma usiqasha ukuze usinikeze izinsizakalo zezomthetho, sikucela ukuthi wabelane nathi ngemininingwane yokuxhumana nathi. Kungadingeka futhi ukuthola eminye imininingwane yomuntu siqu ukuze usingathe icala lakho, kuya ngohlobo lwendaba leyo. Ngaphezu kwalokho, imininingwane yakho izosetshenziswa ukuze ungene ku-invoice yezinsizakalo ezinikeziwe. Uma kudingekile ukuhlinzeka ngezinsizakalo zethu, sinikezela ngemininingwane yakho kubantu besithathu.
Law & More ubhalisa imininingwane yakho ohlelweni futhi igcina le datha ukuze ikunikeze imininingwane. Lokhu kungaba imininingwane ephathelene nobudlelwano bakho Law & More. Uma ungenabo ubudlelwano naye Law & More (noma kunjalo), uyakwazi ukucela imininingwane usebenzisa ifomu lokuxhumana kuwebhusayithi. Law & More icubungula imininingwane yakho ukuze ikuthinte futhi ikunikeze imininingwane oyicelile.
Ukufeza izibopho zomthetho
Law & More icubungula imininingwane yakho ukuze ifeze izibopho zomthetho. Ngokomthetho kanye nemithetho yokuziphatha esebenza kubameli, sinesibopho sokuqinisekisa ubuwena bakho ngesisekelo somazisi osemthethweni.
Law & More iqoqa imininingwane yakho ngenhloso yokuqasha nokukhetha. Lapho uthumela isicelo somsebenzi ku Law & More, idatha yakho yomuntu siqu igcinwa ukuze kutholwe ukuthi uzomenyelwa kwinhlolokhono yomsebenzi futhi ukuxhumana nawe mayelana nesicelo sakho.
Law & More isebenzisa amanethiwekhi emidiya yokuxhumana nomphakathi, okuyi-Facebook, Instagram, Twitter kanye ne-LinkedIn. Uma usebenzisa imisebenzi kuwebhusayithi maqondana nemithombo yezokuxhumana, siyakwazi ukuqoqa imininingwane yakho ngokusebenzisa amanethiwekhi wokuxhumana nabantu othintekayo.
Ukulinganisa ukusetshenziswa kwebhizinisi lokulinganisa
Ukukala ukusetshenziswa kwebhizinisi kwewebhusayithi yayo, Law & More isebenzisa insizakalo ye-Leadinfo eRotterdam. Le nsizakalo ikhombisa amagama enkampani namakheli asuselwa kumakheli we-IP yezivakashi. Ikheli le-IP alifakiwe.
Amabanga okusebenza kwedatha yomuntu siqu
Law & More icubungula idatha yakho yomuntu siqu ngesisekelo esisodwa noma ngaphezulu zalezi zizathu ezilandelayo:
Law & More ingacubungula imininingwane yakho ngoba unikeze imvume yokucutshungulwa okunjalo. Unelungelo lokuhoxisa le mvume ngaso sonke isikhathi.
Kususelwa kwisivumelwano (esisazophethwa)
Uma uqasha Law & More ukuhlinzeka ngezinsizakalo zezomthetho, sizocubungula imininingwane yakho uma futhi kunwetshwa okudingekayo ekwenzeni lezi zinsizakalo.
Imininingwane yakho izocutshungulwa ukuze ihambisane nezibopho zomthetho. Ngokomthetho wokuqola imali waseDashi kanye nomthetho wokuxhasa ngezimali kwamaphekula, abameli baphoqelekile ukuthi baqoqe futhi baqophe imininingwane ethile. Lokhu kufaka ukuthi, phakathi kwabanye, ubunikazi bamakhasimende budinga ukuqinisekiswa.
Law & More icubungula imininingwane yakho lapho sinentshisekelo esemthethweni yokwenza kanjalo nalapho ukucubungula kungaphuli ilungelo lakho lobumfihlo ngendlela engafani.
Yabelana ngemininingwane yomuntu siqu nabantu besithathu
Law & More kuveza imininingwane yakho kubantu besithathu kuphela lapho lokhu kunesidingo sokuhlinzeka ngezinsizakalo zethu, ngokuhlonipha izizathu ezishiwo phambilini. Lokhu kungafaka ukuphetha kwezivumelwano, ukudalula imininingwane yomuntu maqondana nezinqubo (zezomthetho), ukuxhumana nomuntu osebenzisana naye noma ukunika amandla abanye abantu egameni futhi kukhishwe Law & More, njengabahlinzeki be-ICT. Ngaphezu kwalokho, Law & More anganikela ngemininingwane yomuntu siqu kunhlangano yesithathu, efana nokuphatha noma isiphathimandla esimiswe esidlangalaleni, yize kunesibopho esingokomthetho sokwenza kanjalo.
Kuzoqedwa isivumelwano somprosesa neqembu lesithathu ngalinye elisebenza ngemininingwane yakho bese likhomishini Law & More. Njengomphumela, yonke iprosesa nayo inesibopho sokuhambisana ne-GDPR. Amaqembu wesithathu anikwe amandla yi Law & More, kepha ahlinzeke ngezinsizakalo njengesilawuli, azibophezele ngokwazo ukuthobela i-GDPR. Lokhu kufaka ngokwesibonelo ama-accountants kanye nababhali.
Ukuphepha kwemininingwane yomuntu
Law & More iyakwazisa ukuphepha nokuvikelwa kwemininingwane yakho yangasese ngezinga elikhulu futhi inikela ngezindlela ezifanele zobuchwepheshe kanye nenhlangano zokuqinisekisa izinga lokuphepha elifanele ubungozi, ligcina isimo sobuciko engqondweni. Nini Law & More isebenzisa izinsizakalo zabantu besithathu, Law & More uzoqopha izivumelwano eziphathelene nezinyathelo ezizothathwa esivumelwaneni seprosesa.
Isikhathi sokugcinwa kabusha
Law & More izogcina imininingwane yomuntu uqobo ecubungwayo engasasebenzi kunesidingo ukuze kufinyelelwe kwinhloso ebibekelwe yona lapho imininingwane iqoqwe khona, noma kunalokho okudingeka yimithetho noma imithetho.
Amalungelo wobumfihlo wezifundo zedatha
Ngokomthetho wobumfihlo, unamalungelo athile lapho idatha yakho yomuntu siqu icutshungulwa:
Unelungelo lokuthola imininingwane yokuthi iyiphi idatha yakho uqobo ecutshungulwa futhi ufinyelele kule datha yomuntu siqu.
Unelungelo lokucela umlawuli ukuthi alungise noma aqedele imininingwane yomuntu engalungile noma engaphelele.
Kwesokudla ukwenza iphutha ('ilungelo lokukhohlwa')
Unelungelo lokucela Law & More ukusula idatha yomuntu siqu ecutshungwayo. Law & More izosula le mininingwane yomuntu siqu kulezi zimo ezilandelayo:
uma imininingwane yomuntu siqu ayisadingeki maqondana nenhloso eqoqwe ngayo;
uma uhoxisa imvume yakho okusekwe kuyo ukucubungula futhi akukho sizathu esingokomthetho sokucubungula;
uma wenqaba ukucutshungulwa futhi azikho izizathu ezizwakalayo zokufaka;
uma imininingwane yomuntu siqu icubungulwe ngokusemthethweni
uma imininingwane yomuntu siqu kufanele isulwe ukuze ihambisane nesibopho esingokomthetho.
Ilungelo lokukhawulelwa kokusebenza
Unelungelo lokucela Law & More ukukhawulela ukucubungulwa kwemininingwane yomuntu uma ukholwa ukuthi akudingekile ukuthi imininingwane ethile icutshungulwe.
Unelungelo lokuthola imininingwane yomuntu uqobo Law & More izinqubo kanye nokuhambisa leyo datha kwenye isilawuli.
Unelungelo, nganoma yisiphi isikhathi, ukwenqaba ukucubungula idatha yakho uqobo Law & More.
Ungathumela isicelo sokufinyelela, ukulungiswa kabusha noma ukuqeda, ukusula, ukukhawulelwa, ukutholakala kwedatha noma ukuhoxiswa kwemvume enikezwe Law & More ngokuthumela i-imeyili kuleli kheli le-imeyili elilandelayo: [i-imeyili ivikelwe]. Uzothola impendulo kwisicelo sakho kungakapheli amasonto amane. Kungaba nezimo lapho Law & More ngehluleka (ngokugcwele) ukwenza isicelo sakho. Lokhu kungaba ngokwesibonelo uma ukugcinwa kwemfihlo kwabameli noma isikhathi sokugcinwa ngokusemthethweni kusenziwa.